Wararka Maanta: Talaado, May 15, 2018-Faah faahin ku saabsan dagaalka Tuka-Raq
Wararka Maanta- Talaado, May 15, 2018
Faah faahin ku saabsan dagaalka Tuka-Raq
Talaado, May, 15, 2018 (HOL) - Dagaal xoogan oo illaa saakay ka soconayey dulleedka Tukaraq ayaa haatan qaboobey waloow ay jiraan rasaas maqalkeeda degaanada ugu dhow laga maqlayo.
Dagaalkan oo ah kii ugu cuslaa ee laba ciidan dhexmara ayaa khasaare xoogan uu soo gaadhey labada dhinac iyadoo dhimashada ciidanku ay aad u badan tahay, dhaawacuna uu ka muuqdo goobaha caafimaad ee labada dhinac.
Maamulka Puntland war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa waxa ay ku sheegeen in maamulka Somaliland duulaanka ku soo qaaday, halka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu sidoo kale ku eedeeyey in Puntland ku soo duushey guulna ay ka soo hooyeen ciidamadoodu.
Ma jiraan dad dhexdhexaad ah oo ku sugan halka dagaalku ka dhacayo, waxase qasaaraha labada dhinac la sheegayaa in uu yahay mid aad u badan, iyadoo gaadiid la kala qabsaday qaarna la gubey labada dhinacba.
Dhinaca Puntland waxa ay sheegteen in ay qabsadeen sadex gaadhi oo mid ka mid ah uu Beebee yahay, waxaase dad ku sugan tuulada God-qaboobe ay ii sheegeen in ay arkeen Beebeega xili hore oo maanta ah.
Dhinaca Somaliland waxa ay sheegteen 4 gaadhi oo kuwa dagaalka ah oo Kaare ku jiro walow ay Kaaraha beeniyeen dhinaca Puntland, dad reerguuraa ah waxa sheegeen in xili ay meeshaas ka cararayeen ay arkayeen Kaare ku jira meel god ah dagaal culusina ka socdey cid uu raacayna inaanay xaqiijin karin ayay sheegeen.
Dagaalka Tukaraq ayaa u muuqda mid haatan bilaabmay iyadoo awooda ciidan ee halkaas isku horfadhida ay tahay mid aan labada dhinac waxba reeban keeni karana baaba ka soo kabashadiisu adkaan doonto.
Wixii ka soo kordha dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa iyadoo wararku ay sheegayaan in dagaalku uu ku soo ururay magaalada Tukaraq iyo hareereheeda.
Inta badan dowladdaha Muslimka oo isku raacay in Ramadaanku bilaabanayo maalinta Khamiista ah
5/15/2018 3:35 PM EST
Talaado, May, 15, 2018 (HOL)– Inta badan wadamada Muslimka ah oo ay ku jiraan Sacudiga iyo Indonesia ayaa sheegay in maalinta Arbacada oo Barri ku beegan la buuxin doono 30ka bisha Shacbaan.
Somaliland oo looga dabaal-degay 18ka May
5/15/2018 11:29 AM EST
Talaado, May, 15, 2018 (HOL)–Guud ahaa gobollada Somaliland waxaa si weyn loogu dabaaldegay gooni isku taaga Somaliland ee 18 May, taas oo loo soo raray 15 May ka dib markii ay ku beegan tahay Ramadaan.
Madaxweyne Farmaajo “Waa in dagaalka Tuka-raq degdeg lagu joojiyaa
5/15/2018 10:17 AM EST
Talaado, May, 15, 2018 (HOL)-Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa uu ka walaacsanyahay dagaalka saakay kasoo cusboonday deegaanka Tuka-raq ee Gobolka Sool, kaasoo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay dagaalka saaka ka dhacay Tuka Raq
5/15/2018 7:06 AM EST
Talaado, May, 15, 2018 (HOL)-Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa ka hadlay dagaalka saakay ka dhacay deegaanka Tuko-raq, waxaanu ku eedeeyey Soomaaliya inay dagaalkaasi ku soo qaaday,isla markaana ay iska difaaceen.
Soomaaliya iyo Turkiga oo ka wada hadlay iskaashiga dhaqaalaha, Ganacsiga iyo waxbarashada
5/15/2018 2:00 AM EST
Talaado, May. 15, 2018 (HOL)-Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Mahdi Maxamuud Guuleed Khadar oo safar shaqo ku jooga magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa waxa uu kulan la yeeshay dhiggiisa Dalkaas, Dr Recep Akdag.
Warar dheeraad ah dagaalka xiligan ka soconaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool
5/15/2018 1:42 AM EST
Talaado, May. 15, 2018 (HOL)–Subaxnimadii hore ee saakay ayaa dagaal laysku adeegsanayo hubka waaweyn uu ka bilaawday deegaanka Tukaraq oo Laascaanood Bari uga beegan 52Km.
Dagaal goor dib uga qarxay deegaanka Tuka –Raq ee gobolka Sool
5/15/2018 1:01 AM EST
Talaado, May. 15, 2018 (HOL)–Wararka ka imanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in goor dhaw uu dagaal culus dib uga qarxay deegaanka Tuka-Raq oo bilihii ugu danbeeyayba ay ka jirtay xiisad coladeed oo u dhaxeysa Soomaaliland iyo Puntland.
Dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al-shabaab oo ka socda gobolka Hiiraan
5/15/2018 12:21 AM EST
Talaado, May. 15, 2018 (HOL)–Dagaal markiisii hore ku bilaawday Al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah laakiin markii danbe ay ku biireen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ka soconaya qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan.
15ka May maalinta dhalinyaradda Soomaaliyeed oo maanta loo dabaal-degayo
5/15/2018 12:11 AM EST
Talaado, May. 15, 2018 (HOL)–15-ka May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed kuna beegan aas aaskii Ururkii dhaliyarada SYL ayaa lagu wadaa in munaasabado lagu weyneynaayo lagu qeybaha kala duwan ee dalka.
Shirka Baydhabo ee madaxda dowlad gobolleedyada oo galay maalintii labaad
5/15/2018 12:02 AM EST
Talaado, May. 15, 2018 (HOL)–Waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ka soconaya maalintii labaad shir ay halkaa ku leeyihiin madaxda dowlad gobolleedyada dalka Soomaaliya.
Somalia enhances security ahead of Ramadan -Xinhua
5/15/2018 8:23 AM EST
MOGADISHU, May 15 (Xinhua) -- Somalia security forces have beefed up security in major urban centers in the restive capital city, Mogadishu ahead of Islamic holy month of Ramadan which begins worldwide this week.
UN Migration Agency: 48,000 Somalis to Benefit from Health Services -IOM
5/15/2018 8:16 AM EST
East African chief justices want bigger role in EAC affairs -Daily Nation
5/15/2018 5:41 AM EST
Qatar pledges support for Somalia amid UAE tensions -AFP
5/15/2018 5:11 AM EST
Qatar’s Emir held talks on Monday with the Somali president in Doha and pledged support for the East African country, amid tensions between the two countries and the UAE.
Sentencing in Kansas bomb case delayed till September -AP
5/15/2018 5:07 AM EST
WICHITA, Kan. (AP) - A federal judge has delayed the sentencing of three men who plotted to bomb a mosque and apartment complex housing Somali refugees in Kansas.
Foreign shop owners told to close -IOL
5/15/2018 5:05 AM EST
Twelve African countries joined U.S. opening of embassy in Jerusalem -africaNews
5/15/2018 4:53 AM EST
A ‘Firefight’ in Somalia Exposes Weaknesses of Pentagon Combat Rules in Africa -Daily Beast
5/15/2018 4:47 AM EST
58 dead in Gaza protests as Israel fetes U.S. Embassy move -AP
5/15/2018 3:30 AM EST
Fighting between Somaliland and Puntland forces erupts in Tukaraq town -HOL
5/15/2018 3:02 AM EST
MOGADISHU (HOL) - Fierce fighting has started between forces loyal to Puntland state and the breakaway Somaliland in Sool region on Tuesday, Puntland minister confirmed.
Doha to continue support for unity, stability in Somalia: Qatari emir -PressTV
5/15/2018 2:51 AM EST
U.S. criticises China for shielding Myanmar from U.N. action -Reuters
5/15/2018 1:20 AM EST
Quarry workers abandon jobs after recent deaths of colleagues -Standard
5/15/2018 1:03 AM EST
Somali-American author encourages youth to be true to selves -Columbus Dispatch
5/15/2018 12:52 AM EST